Onu ogugu nke ndi njem jiri Tram na Izmir rute 50 Nde | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Aegean35 IzmirOnu ogugu nke ndi njem jiri Tram buru na İzmir erute Nde 50
09 / 11 / 2019 35 Izmir, ụgbọ okporo ígwè, Mpaghara Aegean, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Turkey, tram
Onu ogugu ndi njem njem n’azu na Izmir ruru nde
Ọnụ ọgụgụ ndị njem na-ebugharị na İzmir ruru nde 50. Karşıyaka na okporo ụzọ Konak ruru 120 puku ndị njem kwa ụbọchị.
Ọnụ ọgụgụ ndị njem na-ebugharị na tram, nke bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa nke ụgbọ njem ọha na eze, na-eji nwayọọ nwayọọ amụba. N’ime ọnwa anọ gara aga, İzmir Tram, nke na-ebugharị nde ndị njem 15, enyewo aka dị ukwuu na netwọ ụgbọ njem İzmir na obere oge site na iburu ndị njem nde 50 nde.
E wughachiri tram 64, nke nọ na Izmir ọtụtụ afọ gara aga, mgbe ezumike otu afọ gasịrị. Karşıyaka usoro abụọ dị iche iche a na-akpọ obodo ahụ malitere ijere ndị bi na ya ozi. Na 2017 Karşıyaka Mgbe tram bidoro ịrụ ọrụ, ndị İzmir ndị nwetara tram ọzọ nabatara usoro ha gosipụtara nnukwu mmasị na obere oge. Site na ntinye nke akara Konak na 2018, tram ghọrọ otu n'ime ụzọ dị mkpa iji ụgbọ njem ọha.
Oge ụgbọ elu gafere
Mmasị na-abawanye ụba n’ụbọchị nke ọ bụla na-agafe agafe na-egosi na ọnụ ọgụgụ ndị njem. Ugboro ugboro njem a na-abawanye na mmeghe nke ụlọ akwụkwọ. Konak Tramway, ụtụtụ na mgbede, n’oge mgbe ọchọrọ ihe karịrị nkeji ise. Konak Tram nke na-ebuga ọtụtụ puku ndị njem 90 kwa ụbọchị, na-akwụsị na ọdụ Konak İskele na Alsancak Train. Karşıyaka N'ime ụgbọ ụkwụ, a na-eburu ọtụtụ ụbọchị 7,5 na etiti nkeji, a na-ebu ndị njem 30 puku kwa ụbọchị. Karşıyaka ndị kasị akwụrụ ala n'okirikiri Karşıyaka İskele na Mustafa Kemal Atatürk Halllọ Nzukọ Egwuregwu akwụsị.
Daysfọdụ ụbọchị karịa nkezi
Na-eburu nkezi nke 30 puku ndị njem kwa ụbọchị Karşıyaka Tren, 18 Septemba 2019 na Wednesde bu ihe dị ka puku ndị njem 42. Ọnụ ọgụgụ ndekọ nke ndị njem nọ na Konak Tram 9 Septemba 2019 dị na Mọnde. Ndị njem karịrị 131 chọrọ karịa Konak Tram.
Map Map Izmir
Minister Turhan: Yolcu Onu ogugu nke ndi njem ha bugara site na YHT 44…
Onye 6 njem ụgbọelu ruru 97,7 Nde kwa ọnwa
MUTTAŞ Airport Ụgbọ njem Ụgbọ njem 2 Million ruru
Ndị ọbịa 13 na Konya mgbe YHT…
Ọnụ ọgụgụ 2 nke ụgbọ oloko ndị dị n'ụwa na-eru ọtụtụ nde
Minista Turhan: "Ọnụ ọgụgụ ndị njem nọ n'ụzọ nde gaa na 183 Nde…
Kart54 ojiji ruru 94 nde
Number nke ụgbọ oloko, njem na ibu e buru na Vangöl asaa…
Ndị ọrụ ỊZBAN na-agụta ụbọchị maka imebi na İzmir
Ndị na-ahụ maka chụpụrụ na Ministry of Transport İş
Onu ogugu nke njem ya na akwuru na Samsun Mkparita Uka Tartışma
Na-eme ka a mara ọnụ ọgụgụ nke ndị njem
tram ụzọ gaa Karşıyaka
Ụzọ Konak Tramway
Ọdụ Konak Tram